ရှေးခေတ်ကြက်သားနှင့်ဖက်ထုပ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
မြေပြင်အမဲသားနှင့်အတူအိမ်လုပ် taco သို့ကျဆင်းလာ
အညိုရောင်သကြားနှင့်ကြက်သွန်နီ caramelize ဖို့ဘယ်လို
© Copyright ©2021 All rights reserved pmc2019.pt | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ရှေးခေတ်ကြက်သားနှင့်ဖက်ထုပ် နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်အရသာနှစ်ခုလုံးသောမိသားစုအကြိုက်ဆုံးအစားအစာပါ! လွယ်ကူသောအိမ်လုပ်ဟင်းရည်ထဲ၌နူးညံ့သောဖက်ထုပ်များနှင့်အရည်ရွှမ်းသောကြက်သားများအပါအ ၀ င်ဤလွယ်ကူသောစာရွက်ကိုခြစ်ရာများဖြင့်ဖန်တီးထားသည်။
မှိုနှင့်အတူနှေးနှေး cooker Salisbury ကင်
ဤစာရွက်သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ရာသီဥတုများနှင့်ပြည့်စုံစွာနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကြက်တစ်ကောင်လုံးနှင့်စတင်သည်။ စားစရာများပါဝင်သောရိုးရှင်းသောဖက်ထုပ်များသည်နူးညံ့။ နူးညံ့သည့်တိုင်အောင်ဟင်းရည်တွင်တန့်နေသည်။ ၎င်းသည်မိသားစုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပြီးအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။
အိမ်လုပ်ကြက်နှင့် dumplings သည်အကောင်းဆုံးအစားအစာဖြစ်သည်။ ငါမြန်ဆန်လွယ်ကူသောကိုချစ်နေစဉ် Crock Pot ကြက်သားနှင့်ဖက်ထုပ် , လုံးဝအိမ်လုပ်သောအစာနှင့်တူအတော်လေးမရှိ။
ခြစ်ရာကနေဟောင်းခေတ်ကြက်သားနှင့်ဖက်ထုပ်လုပ်ခြင်းသင်ထင်ချင်ပါတယ်ထက်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အချိန်ကာလအများစုသည်အရသာမပြည့်မှီတိုင်အောင်ကြက်သားများကိုမျှတစွာ ထား၍ ပြီးပြည့်စုံသောနူးညံ့သည့်ကြက်သားကိုချက်ပြုတ်သည်။
ဒီချက်ပြုတ်နည်းဟာမီးဖိုပေါ်ကကြက်သား၊ ကြက်သွန်နီနဲ့မုန်လာဥနီတို့နဲ့စတင်ပါတယ်။ ထိုဟင်းရည်အောင်သောအခါငါကြီးမားသောကြက်သွန်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်အရွက်မှအပိုအရောင်နှင့်အရသာထည့်သွင်းဖို့အရေပြားပေါ်မှာထားခဲ့ပါ။ သင်၏အကြိုက်ဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြစ်သောပင်လယ်အော်အရွက်၊ ကြက်ဥရာသီအလိုက်အပေါက်များနှင့်လတ်ဆတ်သော parsley စသည့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်ထည့်သွင်းရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကြက်သားကိုချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ဟင်းရည်ကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျခြစ်ရာကနေဖက်ထုပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားဖူးပါလျှင်, သူတို့သည်မည်မျှလွယ်ကူသောကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်! အချို့လူများကသူတို့ကို Bisquick နှင့်ပြုလုပ်လိုသော်လည်း၊ သူတို့သည်သင်၏စားစရာခန်း၌သင်ရှိနှင့်ပြီးသားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူပါအောင်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူပါသည်။
အရမ်းသင့်ရဲ့ဖက်ထုပ်စုံလင်အောင်အတွက်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားမရကြဘူး, ဒါကြောင့်သူတို့ကဖြတ်ပုံကိုအရေးမထားဘူး။ သင်သေချာစေချင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာသင်၏မုန့်စိမ်းသည် ၁/၈ လက်မအထူရှိသည်။ ဤသည် dumplings ပြီးပြည့်စုံသောကိုက်ညီမှုပေးသည်။
ချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်ကြက်ဥတွေကိုချက်ပြီးတဲ့နောက်ပြောင်းဖူးနဲ့ရေနည်းနည်းလေးနဲ့ဟင်းရည်ကိုပိုထူအောင်ကြိုက်တယ်။ အတူတူပမာဏအတူတူရောနှောရုံနှင့်ဟင်းရည်လိုချင်သောကိုက်ညီမှုရောက်ရှိသည်အထိတစ်ကြိမ်အနည်းငယ်ထည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် creamier ဟင်းရည်ကိုပိုနှစ်သက်ပါကဖက်ထုပ်များချက်ပြုတ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်နို့အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လေးလံသောမုန့်အနည်းငယ်ကိုထည့်ပါ။
ပြင်ဆင်ချိန်၃၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၁ နာရီ ဆယ့်ငါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁ နာရီ လေး မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၈ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson ရှေးခေတ်ကြက်သားနှင့်ဖက်ထုပ်များသည်နှစ်သိမ့်မှုနှင့်အရသာရှိသောမိသားစုအကြိုက်ဆုံးအစားအစာဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၃ မုန်လာဥနီ သုံးပုံနှစ်ပုံဖြတ်
▢၃ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရိုးတံ သုံးပုံနှစ်ပုံဖြတ်
▢၈ ခွက် အနိမ့်ဆိုဒီယမ်ကြက်သားဟင်းရည်
▢အရသာအတွက်ဆား & ငရုတ်ကောင်း
▢1 ¾ ခွက် ဂျုံမှုန့် ဖုန်မှုန့်အဘို့အပိုဆောင်း
▢⅓ ခွက် အတိုကောက်
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါမှုန့်
▢¾ ခွက် နို့
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဆားငန်
▢၄ ဇွန်း ပြောင်းဖူး
ကြက်သား၊ ကြက်သွန်၊ မုန်လာဥနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကိုအိုးကြီးထဲ၌ပေါင်းစပ်ပါ။ အရသာအတွက်ရာသီ။
ကြက်သားဟင်းရည်ထည့်ပါ။ ဆူပွက်စေခြင်းငှါအပူကိုလျှော့ချနှင့် 45-60 မိနစ်မျှကြက်သားကြက်သားနူးညံ့သည်အထိ။ ဟင်းရည်မီးဖိုချောင်နေစဉ်, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖက်ထုပ်ပြင်ဆင်ပါ။
ကြက်သားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုဟင်းရည်မှဖယ်ပါ။ အသားအရေနှင့်အရိုးများကိုဖယ်ရှား။ ကျန်ကြက်သားများကိုခွဲထားပါ။
ညင်ညင်သာသာဟင်းရည်ဖို့ dumplings ထည့်ပါ။ 15-20 မိနစ်မျှအောင်လုပ်ပါသို့မဟုတ်တင်ဒါသည်အထိ။
ကြက်သား (နှင့်ဆန္ဒရှိလျှင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ) ကိုဟင်းရည်ထဲသို့မွှေပြီး ၂-၃ မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ်အပူမကုန်မချင်းချက်ပြုတ်ပါ။
မုန့်ညက်၊ မုန့်ဖုတ်အမှုန့်၊ ဆားနှင့်အတိုကိုရော။ မရောမှီတိုင်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ပါ။
တစ်ချိန်တည်းတွင်နို့ကိုအနည်းငယ်ထည့်ပြီးပေါင်းစပ်သည်အထိရောမွှေပါ (သင်အားလုံးလိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ၊ နူးညံ့သော်လည်းစေးကပ်သောမုန့်စိမ်းကိုလိုချင်သည်) ။
မုန့်စိမ်းချောမွေ့သည်အထိတစ် ဦး အရသာခံမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအကြိမ်အနည်းငယ်ဒူးထောက်ပါ။
သင့်မျက်နှာပြင်ကိုရက်ရက်ရောရောထွေးပြီးမုန့်စိမ်းကို″″ ထူထဲသို့လှိမ့်ချလိုက်ပါ။ မုန့်စိမ်း 1″ x2ips strips တွေထဲသို့ဖြတ်ယူပါ။ ကပ်ကပ်ရှောင်ရှားရန်ရက်ရက်ရောရောအမှုန့်။
Thicken မွေးဖွားခြင်း (စိတ်ကြိုက်)
သေးငယ်တဲ့ပန်းကန်လုံးတွင်4ဇွန်းပြောင်းနှင့်အတူ4ဇွန်းရေနှင့်အတူပြောင်းဇွန်း။
မုန်လာဥနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုဘေးထွက်တွင်ဖြစ်စေ၊ ကုန်တယ်ဖြစ်စေ၊ ကြက်နှင့်အတူဟင်းရည်ထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ ပေးထားသည့်အာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်သည်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အသုံးပြုသောကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
သော့ချက်စာလုံးခြစ်ရာကနေအိမ်လုပ်, ဟောင်းခေတ်ကြက်သားနှင့်ဖက်ထုပ်ထံမှကြက်နှင့်ဖက်ထုပ် သင်တန်းအဓိကသင်တန်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
Crock Pot ကြက်သားနှင့်ဖက်ထုပ်
Creamy ကြက်သားခေါက်ဆွဲ Casserole (ခြစ်ရာမှ)
Bang Bang ပုစွန်
အဘယ်သူမျှမဖုတ်ဂရေဟမ် Cracker အပေါ်ယံလွှာ
သစ်သီးဝလံအရသာရှိသောရေချက်ပြုတ်နည်းများ - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ကျန်းမာရေးရေငတ်ပြေစေသည့်ဆေးများ။